စပိန်အတွက်နာမ်စကားစုများကိုဖွဲ့စည်းရန် Lo Que အသုံးပြုခြင်း
'' Lo Que '' အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တစ်နာမ်အမျှ Acts သောစာပိုဒ်ဖွဲ့စည်း
သတင်းဆောင်းပါးအနေဖြင့်အောက်ပါကောက်နုတ်ချက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းနာမ်အဖြစ်ပြုမူတဲ့ထားသောစာပိုဒ်တိုများဖွဲ့စည်းတဲ့ဘုံလမ်း, lo Que သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏အကြံပြုချက်များဘာသာပြန်ချက်နှင့်အတူစပိန်နာမ်စာပိုဒ်တိုများဖွဲ့စည်းရန်နှင့်၎င်း၏ဝေါဟာရနှင့်သဒ္ဒါအပေါ် key ကိုမှတ်စုရှာဖွေတွေ့ရှိရန် lo Que သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။
Antognini y က otros colegas europeos က y de EE UU presentan esta semana en သိပ္ပံ un Estudio Que señala Que el Proton es စရဖpequeñoက de lo Que se ခရီး။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los resultados confirman lo Que el mismo equipo ya publicó en သဘာဝတရား 2010 en: "အယ်လ် Proton parece SER 0,00000000000003 milímetros menor က de lo Que pensaban los investigadores ။ "
ရင်းမြစ်: ABC.es. ဇန်နဝါရီလ 25, 2013 တွင်ရယူရန်။
Antognini နှင့်အခြားဥရောပနှင့်အမေရိကန်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကပရိုတွန်ယုံကြည်သည်ဘာထက်သေးငယ်ကြောင်းညွှန်ပြကြောင်းသိပ္ပံလေ့လာမှုတစ်ခုယခုအပတ်တင်ဆက်ထားပါသည်။ ရလဒ်ပြီးသား 2010 ခုနှစ်သဘာဝတရားထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောအရာကိုတူညီသုတေသနအဖွဲ့ကအတည်ပြု: "။ အဆိုပါပရိုတွန်သုတေသီများထင်သောအရာကိုထက်သေးငယ် 0,00000000000003 မီလီမီတာဖြစ်ဟန်"
Key ကိုသဒ်ဒါ Issue
lo Que , ဒီရွေးချယ်ရေးအတွက်သုံးကြိမ်အသုံးပြုသောတစ်ဦးအဖြစ်လုပ်ဆောင်မယ့်ထားသောစာပိုဒ်တိုများစတင်ဘုံနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် နာမ် ။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောစကားလုံး, အမျိုးအစားအဖြစ် lo Que စဉ်းစားတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် လိင်မပါသော ဆွေမျိုးနာမ်စား ။ ထိုအခါ Que စိတ်ကူးတစ်ခုသို့မဟုတ်စိတ္တဇအရေးယူရည်ညွှန်းသောအခါ, နီးပါးအမြဲ "အဘယ်အရာကို" သို့မဟုတ်အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါတယ် "အဲဒီအရာ။ " ဒီလမ်းအတွက် lo Que သုံးပြီးနေ့စဉ်စာပိုဒ်တိုများ၏နမူနာများပါဝင်သည်:
lo Que pasa; ဘာဖြစ်နေတာလဲ။
lo Que hemos hecho; အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ပွုပါပွီ။
lo Que ငါ့ကို preocupa; အဘယ်အရာကိုငါ့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေသည်။
lo Que sabemos; အဘယ်အရာကိုကြှနျုပျတို့သိ။
lo Que es inolvidable; အဘယ်အရာကိုမမေ့နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။
ပိုပြီးတိကျတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရည်ညွှန်းပြီးတဲ့အခါမှာဘာသာပြန်ချက်အတွက်အသုံးပြုရနိုင် "ကြောင်းအဆိုပါအရာ": Lo Que Tien seis ojos, ခြောက်လမျက်စိရှိတယ်သောအရာ။
ဝေါဟာရနှင့် Grammar ပေါ်ရှိအခြားမှတ်စုများ
EE UU တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အများကိန်းအတိုကောက် Estados UNIDO သည်။
စရဖpequeñoနှင့် menor ၏ဥပမာများမှာ မညီမျှမှုများ၏နှိုင်းယှဉ် ။
se ခရီးတစ်ဖြစ်ပါသည် conjugation reflex ၏ပုံစံကို creer , ယုံကြည်ဖို့သို့မဟုတ်စဉ်းစားရန်အဓိပ်ပာယျတဲ့ကြိယာ။ အဆိုပါ reflex ဒီမှာနဲ့တူကိုအသုံးပြုသည် passive စကားသံကို ကတစ်ခုခုအတိအလင်းဟာယုံလုပ်နေသူဖျောပွခြင်းမရှိဘဲယုံကြည်ဖော်ပြသော၌တည်၏။
စပိန်အတွက် Equipo ဘုံရည်ရွယ်ချက်အတူတူအလုပ်လုပ်လူမျိုး၏အုပ်စုတစုကိုရည်ညွှန်းသည်။ အများအားဖြင့် "အသင်း" ကပိုပြီးမကြာခဏအင်္ဂလိပ်စကားလုံးထက် Non-အားကစားလှုပ်ရှားမှုများမှလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသော။ "သုတေသနအဖွဲ့က" ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအတွက်ဘာသာပြန်ချက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ya များသောအားဖြင့်အလေးပေး add ဖို့အသုံးပြုထားတဲ့ adverb ဖြစ်ပါတယ်။ "ယခုပင်လျှင်" ပဏာမတွေ့ရှိချက်အစောပိုင်းကထုတ်ဝေခဲ့အလေးပေးတဲ့လမ်းအတိုင်းဘာသာပြန်ချက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အပေါ်သင်ခန်းစာများတွင်ကြည့်ပါ parecer , SER နှင့် pensar သူတို့အားကြိယာ၏အသုံးပြုမှုအကြောင်းပိုမိုဘို့။
အဆိုပါ၏အသုံးပြုမှုကိုမှတ်ချက် ကော်မာ အင်္ဂလိပ်ကာလကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ရှိရာအရေအတွက်။ မူရင်းဝါကျစပိန်အတွက်ထုတ်ဝေရာမှ လာ. , ဒါကြောင့်သူအရေအတွက်တစ်ခုအထိအတူပြန်ဆိုခဲ့ကြလိမ့်မယ်, မက္ကစီကိုကနေလာခဲ့ရသည်။
ပွငျသစျထဲတွင် (ရယူနိုင်သောရန်, ဝင်းမှ) "Gagner" Conjugate လုပ်နည်း
အီတလီကြိယာ conjugation: Lasciarsi
လျပြောပြ Tels ကိုပြောပြပါ: ပြင်သစ်နာမဝိသေသနနှင့် Pronoun
စပိန် Conjunction '' Y ကို '' အသုံးပြုခြင်း
'' Pedir, '' Servir, 'နဲ့' Vestir '' ၏ conjugation
ပွငျသစျထဲတွင် (ပါတီရန်, အခမ်းအနားကျင်းပရန်) "Fêter" Conjugate လုပ်နည်း
'' Pensar '' အသုံးပြုခြင်း
အီတလီအတွက်ကြိယာ "Comprare" Conjugate လုပ်နည်း
ငါမစ်ရှင်များခရီးစဉ်အပေါ် Go သငျ့သလော
ရေကနေတစ်ဦးကနူးထဲသို့ Get လုပ်နည်း
Clint Eastwood Starring7ဂရိတ်ရုပ်ရှင်
ကလောင်နှင့်စက္ကူတစ်ခုသို့မဟုတ် Calculator ကိုမရှိရင်တစ်သိကောင်းစရာတွက်ချက်
7 ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများအတွက် Histogram Make လုပ်နည်း
Beginners များအတွက်လွယ်ကူသော Drawing သင်ခန်းစာ
ပထမကမ္ဘာစစ်: Amiens ၏တိုက်ပွဲ
Adverb Clauses ဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း
2013 Chevrolet Silverado 1500 Truck ကားပျေါလှငျ
အဆိုပါ Toltecs - ထို Aztecs ၏ Semi-ဒဏ္ဍာရီ Legend
ပြင်သစ်စကားပြောမှာ "Chou" ကိုသုံးပါဖို့ကိုဘယ်လို
Crucigramas: သင့်စပိန်အတန်းများအတွက် Crossword ပဟေဠိ Make
ဗီဒီယိုကို Poker မဟာဗျူဟာ